I-Sony idibanisa ukwahlula-hlula kwayo ngeekhamera, iTV kunye nesandi | I-Androidsis
I-Sony idibanisa ukwahlula-hlula kwayo ngeekhamera, iTV kunye nesandi
USony Mobile uthumele ilahleko kwiindawo ezininziNgelixa amanye amacandelo, njengekhamera, umabonakude kunye nezahlulo zeaudio, aqhubeka nokuthumela izigidi zeedola kwinzuzo. Nangona kunjalo, oko kungaphela kungekudala, njengoko u-Sony ebhengeze ukuba idibanisa ukwahlula-hlula kwayo ngekhamera, iTV kunye nolwahlulo lweaudiyo.
Icandelo elitsha liya kubizwa 'Iimveliso zombane kunye nezisombululo' kwaye kuya kukhokelela kutshintshiselwano lobuchwephesha phakathi kweemveliso ezizayo.
Abanye abantu bavakalise ukumangaliswa kukudibana, njengoko bebekulindele ukuba uSony athengise okanye avale icandelo lalo elihamba nomnxeba. Njengoko sibona, inkampani yaseJapan inezinye izicwangciso. Ngoku amaqela abo ayenye, "usukuzwano" phakathi kwabo akufuneki lubekho.
Inkampani ithi izakuqhubeka ukubhengeza iziphumo zokusebenza kweefowuni zayo, nokuba ithathe isigqibo esitsha. Icandelo elihambahambayo liyenza izinto zimbi kakhulu. Iingxelo zithi ilahlekelwe yimali engaphezulu (i-480 yezigidi zeedola) kunokuba icandelo lokudlala lalinenzuzo ($ 317 yezigidi) kwikota yesibini ye-2018.
U-Sony usenethemba elikhulu lokwahlula-hlulwa kwayo, ukuba singayibiza njalo. Uqikelela ukuba umgca weXperia ungaqala ukufumana amanani afanelekileyo nge-2021, ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, inkampani ikwaceba ukunciphisa inkcitho yayo kwisiqingatha.
Icandelo elitsha leeMveliso ze-Elektroniki kunye neziSombululo iya kwenziwa ngokusemthethweni ngo-Epreli 1. Okumangalisa kukuba, intshukumo ayichaphazeli isitokhwe sikaSony nangayiphi na indlela. Okwangoku asizukubona ukuba ezi ndaba ziya kuyichaphazela njani intengiso kunye nendlela uphawu lwaseJapan oluwulungisa ngayo umbono walo womdlalo, kuba ingaphezulu kokucacileyo ukuba ifuna indlela entsha yokubuyela kwinto eyayiyiyo ngaphambili kwaye ungabi yi-HTC enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Sony idibanisa ukwahlula-hlula kwayo ngeekhamera, iTV kunye nesandi
I-minigame entsha kaGoogle xa ungenalo unxibelelwano
Ekugqibeleni sinokuthintela iidilesi ze-imeyile nge-Edison Mail